Madaxweyne Siilaanyo Oo Xil Ka Qaadis Iyo Isku Beddel Ku samayeeyay Masuuliyiin Kadibna Aqbalay Is Casilaad - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Madaxweyne Siilaanyo Oo Xil Ka Qaadis Iyo Isku Beddel Ku samayeeyay Masuuliyiin Kadibna Aqbalay Is Casilaad
Hargeysa(ANN)Madaxweynaha Somaliland Axmed Siilaanyo, ayaa xil ka qaadis iyo isku shaandhayn ku sameeyay masuuliyiin ka tirsan xukuumaddiisa, sidoo kalena aqbalay dalabka is casilaad kaga timi masuul.
Sidaana waxa lagu sheegay war saxaafadeed caawa kasoo baxay qasriga Nadaxtooyada, kaas oo u qornaa sidan:- Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland Mudane Axmed Maxamed Silaanyo waxa uu digreeto madaxweyne oo summadeedu tahay JSL/M/XERM/249-2946/022015 uu isku bedel, xilka qaadis iyo magacaabid ku sameeyey Gudoomiyeyaasha Gobolada Dalka qaar ka mida.
Markuu Arkay: Qodobka 110aad ee Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland; Markuu Tixgeliyay: Ahmiyadda ay Gudoomiyeyaasha Gobolladu u leeyihiin dhismaha Qaranka;
Markuu La Tashaday: Madaxda ay hawshani khusayso; Markuu Arkay: In ay hanan karaan xilalkan loo magacaabay; Wuxuu go’aansaday
1. In Mudane, Maxamuud Cali Saleebaan (Ramaax) laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado Gudoomiyaha Gobolka Awdal ee Jamhuuriyadda Somaliland, (Bedel Gudoomiyihii hore ee Sanaag)
2. In Mudane, Axmed Cabdi Falay, laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado Gudoomiyaha Gobolka Sanaag ee Jamhuuriyadda Somaliland.
3. In Mudane, Yaasiin Maxamed Shide (Yaasiin X), laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado Gudoomiyaha Gobolka Sool ee Jamhuuriyadda Somaliland.
4. In Mudane, Cali Maxamed Faarax, laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado Gudoomiyaha Gobolka Saraar Jamhuuriyadda Somaliland.
5. In Mudane, Maxamed Diiriye Xayd (Dibjir), laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado Gudoomiye Ku-xigeenka Gobolka Togdheer ee Jamhuuriyadda Somaliland.
6. In Mudane, Xaamud Xuseen Cabdillaahi, laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado Gudoomiye Ku-xigeenka Gobolka Saaxil ee Jamhuuriyadda Somaliland.
Ø Xilka Qaadis
1. Ku: Mudane, Maxamed Faarax Aadan
Mudane, Xilalka Qaranka ayey dabcigeed tahay in ay meerto noqoto oo kolba cid hanan karta loo dhiibo, wakhtigan xaadirka ahna waxa aan gartay in xilkii Guddoomiyaha Gobolka Sool aan kaa qaado una magacaabo masuul cusub oo xilkaasi guta.
2. Ku: Mudane, Axmed Cali Nuur
Mudane, Xilalka Qaranka ayey dabcigeed tahay in ay meerto noqoto oo kolba cid hanan karta loo dhiibo, wakhtigan xaadirka ahna waxa aan gartay in xilkii Guddoomiyaha Gobolka Saraar aan kaa qaado una magacaabo mas’uul cusub oo xilkaasi guta.
3. Ku: Mudane, Maxamed Maxamuud Yuusuf
Mudane, Xilalka Qaranka ayey dabcigeed tahay in ay meerto noqoto oo kolba cid hanan karta loo dhiibo, wakhtigan xaadirka ahna waxa aan gartay in xilkii Guddoomiye Ku-xigeenka Gobolka Togdheer aan kaa qaado una magacaabo masuul cusub oo xilkaasi guta.
4. Ku: Mudane, Khadar Cali Cilmi
Mudane, Xilalka Qaranka ayey dabcigeed tahay in ay meerto noqoto oo kolba cid hanan karta loo dhiibo, wakhtigan xaadirka ahna waxa aan gartay in xilkii Guddoomiye Ku-xigeenka Gobolka Saaxil aan kaa qaado una magacaabo masuul cusub oo xilkaasi guta.
Ø Aqbalaad Is-casilaad Gudoomiye
5. Ku: Mudane, Cabdoo Axmed Aayir
Mudane, Tixraac qoraalkaaga summaddiisu tahay XMGA/B/02/286/2015, kuna taariikhaysan 07/02/2015, ujeedadiisuna tahay is-casilaad.
ayaa lagu yidhi qoraalka caawa kasoo baxay qasiga Madaxtooyadda.